Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ???
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ???
1 Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 10th March 2010, 11:49 am
ကျွန်တော့်ရဲ့ အခု Avatar လေးကို မကြိုက်ကြဘူးလား?
အဲလို Avatar မျိုးလေး မလိုချင်ကြဘူးလား?
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်စထောင်ကတည်းက Admin Team အတွက် Avatar လေးတွေ ဆင်တူလုပ်ပေးချင်တာ။
အခုလည်း လုပ်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားမိလို့ပါ။
2 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 10th March 2010, 12:20 pm
လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လိုချင်တာပေါ့။ သားတို့က လုပ်မှလုပ်တတ်တာ။
3 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 10th March 2010, 12:26 pm
z3r0c00l wrote: လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လိုချင်တာပေါ့။ သားတို့က လုပ်မှလုပ်တတ်တာ။
Designer ကြီးက နောက်ရဘူးလေ။
တူက တားထက်တောင် PS ကျွမ်းတာကို။ လာနောက်နေတယ်နော်။ ဟွန်း။
4 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 10th March 2010, 12:38 pm
5 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 10th March 2010, 12:50 pm
6 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 11th March 2010, 9:21 am
အင်းဟုတ်တယ်.... အဲဒါကိုမျက်စိရှန်းပြီးမတွေ့လိုက်ဘူး... ဒါပေမယ့် ကျနော်က ကာတွန်းလူရုပ်လေးတွေကိုလိုချင်တာ... လူနာမည်မကြည့်ခင် Avatar ပုံ ကိုကြည့်တာနဲ့ ဒါဘယ်သူလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးသလိုလေးဖြစ်ချင်တာ... အဲလိုဇာတ်ကောင်မျိုးလေးတွေကို အချိန်အားမှဖန်တီးပေးပါလို့.... ကိုယ်ပိုင် ကာတွန်းရုပ်လေးလိုချင်တာ... အခု ကျနော့်အရုပ်က တခြားမှာလည်းရှိချင်ရှိမယ်လေ... အွန်လိုင်းကနေ ယူထားတာကိုး... အဲလိုစိတ်ကူးမျုိးလေးကောရှိလား... စာသားတွေအစား ကာတွန်းရုပ်ပြောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ... အဲဒါကိုပိုသဘောကျတယ်... ဘယ်သူမှမလုပ်ရင်နေ ညီစွမ်းအကို့ကို လုပ်ပေးနော်.... အာဘွား... :kiss (ဟိုကောင်လေးအကျင့်တွေပါလာတာ )
7 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 11th March 2010, 9:24 am
You Mean Like MZ?
If so, we need the logo first.
Combination of Our Logo and Our Favorite Character can make us unique.
8 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 11th March 2010, 9:48 am
MZ မှာဘယ်လိုပုံတွေသုံးလဲဆိုတာတော့သေချာမသိပါဘူး... သတိမထားမိတာပါ... ဒါပေမယ့် ကိုစေတန် ရဲ့ ပုံလေးကတော့ သူ့ရဲ့ Blog အထိပါ အသက်ဝင်ထားတော့ အဲဒါကို အွန်လိုင်းမှာသူဆိုတာ အဲဒိပုံတွေ့တာနဲ့သိနိုင်လို့ ကျနော်အဲဒလိုပုံစံလေးကိုသဘောကျပါတယ်...
we need the logo first.
Combination of Our Logo and Our Favorite Character
9 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 11th March 2010, 9:59 am
ဆင်တူလေးတွေကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကလပ်စစ်စတိုင်တွေကြိုက်တယ်။
10 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 11th March 2010, 11:30 am
Forum Logo လန်းလန်းလေး အရင်ရရင်ကောင်းမယ်
11 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ??? on 16th March 2010, 10:38 pm
အဆင်ပြေရင် အကိုလည်း တစ်ခုလောက်လိုချင်ပါတယ်
အကိုက သူများတွေလို မလုပ်တတ်ဘူးလေ
12 Re: Admin Team မှ Avatar လှလှလေး လိုချင်သူများ???